Ngokwesibonelo, emazweni ahlukahlukene, amanani bitcoin ingahluka - Blockchain Izindaba
Februwari 5, 2018 admin
Ngokwesibonelo, emazweni ahlukahlukene, amanani bitcoin ingahluka
Kungani emazweni ahlukahlukene izintengo bitcoin kungahluka
Kuye lizwe kanye mfihlo-exchange amazinga, izindleko ngalinye kwempahla mfihlo ingahluka. Siye sacabangela izici eziningana ukuthi nomthelela ekwakhekeni amanani mfihlo emakethe, nokuthi zihlobene indawo abahlinzeki cryptocurrency.
Okokuqala nje, kuhle ukucabangela iqiniso lokuthi akukho namanje akukho simo olwamukelwa ngokusebenzisa i cryptocurrency. Kwamanye, isizathu utshalomali kusengaphambili kuyinkolelo yokuthi sibonga cryptocurrency, ubuchwepheshe blockchain balindelwe sikhathi sokukhula ngokushesha. kwabanye, kuba kulo ngenkolelo yokuthi lelo Bitcoins ukuthi baye bathengela namuhla esikhathini esizayo kuyoba bayindlala kakhulu ekuphileni kwansuku zonke. Kukho konke, futhi cishe kunazo, isizathu ukuthenga bitcoin yisifiso enze inzuzo.
Futhi, sonke siyazi ukuthi bitcoin ayinayo intengo esitebeleni, kuba cryptocurrency endlalekile komnotho digital global ukuthi azenziwanga yinoma yimuphi kwempahla, singanikezwanga nanoma iyiphi lwemali Fiat, futhi ingeyona isiphi isimo sezwe. Nokho, njengoba nezimpahla kakhulu umthengi, kwakhiwa intengo bitcoin is ngesisekelo kwaneliswe isidingo ngoba. Ngamanye amazwi, intengo cryptocurrency emhlabeni sokuqala ukulinganisela ezithile phakathi intengo olunikezwa abathengisi ukuthi abathengi bazimisele ukukhokhela.
Kukhona amazwe lapho ukuhwebelana cryptocurrencies akuvunyelwe, futhi bitcoin kungenziwa kuphela wathenga ngokuqondile abathengisi-abahlinzeki, hhayi ngesikhathi mfihlo-exchange Ukuhwebelana. Ngokwesibonelo, emva interdiction Ukuhwebelana e China, ngevolumu okwenziwe plattform p2p ka LocalBitcoins liye landa kakhulu. Emazweni amaningi, ukuze sithenge bitcoin, udinga ukuba ne-akhawunti yasebhange futhi sekhadi. Ngokwesibonelo, Umlawuli zezimali Korea uye wavalwa ngokusemthethweni ukuthengiselana engaziwa, manje abahwebi ziyadingeka ubhalise akhawunti virtual kuma-akhawunti empela.
Ngenxa yemingcele zokulawula, abadayisa bitcoin ku ezifana plattforms p2p njengoba LocalBitcoins Ungasetha i intengo ulele futhi qiniseka ukuthi abathengi ngizokubuyisela. “abanikezeli” ka bitcoin zivame amelwe ngesimo izinkampani ukubambela inqwaba bitcoins futhi Fiat imali, futhi abanakubatshela imigomo yabo ukuze abathengi encane, ikakhulukazi uma esifundeni odingeka kakhulu cryptocurrencies. Ngokwesibonelo, e-South Korea bitcoin ivuliwe isilinganiso $ 400 ziphindeke kuka US, futhi umehluko ukudayiswa nokuthengwa kungaba kusuka $ 1800 ukuze $ 3000. eNdiya, umdayisi bitcoin inikeza lwemali ngentengo 20% ephakeme kunaleyo lokho efakwe emakethe US. Umehluko intengo ukudayisa kanye ukuthengwa bitcoin eNdiya imayelana $ 1000. eChina, izinga bitcoin kuyinto $ 100 kunaleyo US, kanye lwemali abathengisayo nabathengayo nge umehluko emhlabeni $ 500. Ngesikhathi esifanayo, eRussia izinga bitcoin kuyinto $ 100 ephansi futhi cishe ilingana izinga cryptocurrency emazweni EU, futhi umehluko phakathi ibhidi ne ukudayiswa sipho kungaba mayelana $ 400. Nňkho anjalo intengo, nabathengisi njalo abathengi kwangqingetshe uma befuna ukungena World of Crypto.
Imakethe mfihlo isencane kakhulu futhi akekho olaziyo lokho sasilibangise of bitcoin uyikho noma lokho ikusasa lokhu umkhakha izobukeka. Kulesi emakethe manje kukhona inqwaba yabadlali ukuphishekela umgomo owodwa – ukwenza inzuzo. Futhi lokhu kusho ukuthi ngosuku olulodwa abadlali enjalo izohamba emakethe, ukuthatha nabo imali etholwe. Kodwa nale simo, kukhona omunye inzuzo ukhiye – uma lokhu kwenzeka, funa okunengqondo kuzonciphisa zonke cryptocurrencies amanani ezingeni elifanayo kuwo wonke amazwe futhi zonke izimakethe. Kuze lokhu kwenzekile, nje zama ukujabulela okwenzekayo, elawula e nezinxushunxushu zamanje.
Amanani Bitcoin ingahluka
Scientist.com umkhankaso platform yokuqinisekisa idatha blockchain ezisekelwe
Umuntu ukubikezela kanjani ukuziphatha ngesilinganiso cryptocurrency ngokuya ngenani oda p ...
Uyini o imvelo ...
Thumela Previous:Onjiniyela uMbumbi Blockstream ukudala supercomputer ku blockchain
Thumela Landelayo:Coinbase iqala ukuhlolwa lokugcina Segwit
Februwari 6, 2018 ngesikhathi 8:25 AM
May 11, 2018 ngesikhathi 6:47 AM
Juni 26, 2018 ngesikhathi 6:06 AM